Tekkatho Moe War – HlaMin
Category: Tekkatho Moe War
Unbreakable Bond / Attachment
By Hla Min (Lifelong Learner) on January 11, 2022 • ( Leaveacomment )
Update : January 11, 2022 Irrespective of years gone by, my beloved mother and benefactor still remains in my heart. I wrote the poem for Thway Thauk Magazine in May 1964 in memory of my mom who passed away on March 10, 1964. နှစ်ကာလ ဘယ်လောက်ပဲ ကုန်လွန်ကုန်လွန်ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှာလည်း ကျေးဇူးရှင် မေမေရှိနေ​သေးသည်ပဲ။၁၉၆၄ […]
By Hla Min (Lifelong Learner) on January 5, 2022 • ( Leaveacomment )
Update : January 5, 2022 By Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War) ၂၀၁၆ စွယ်တော်ရိပ်မဂ္ဂဇင်း (၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆) ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်မှာ ၅ နှစ်ကျော်ပြီ။ မြတ်မျိုးမြင့် ၏ မျက်နှာဖုံးပန်းချီလက်ရာ။မဂ္ဂဇင်းကော်မတီဲ၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် အကျိုးအမြတ် ကျပ်ငွေ ၇၆ သိန်းကျော် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာပူဇော်ပွဲအတွက် စာပေလှူဒါန်းမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ယနေ့တိုင် ပီတိကုသိုလ် ပွားလျက်ရှိနေပါကြောင်း။ It’s been more than five years since the publication (on December 29, 2016) […]
Update : January 4, 2022 The following isarendition of “SWEL DAW” from the poems by Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War), Maung Sein Win (Padeegone) and Saya U Nyunt Htay (Maung Nyunt Htay – Ah Htet Min Hla) You were the victim ofasuperstitious […]
Update : December 29, 2021 Lyrics : Tekkatho Moe War (Saya U Moe Aung) Melody : Ko Than Po (M75, Swel Daw Yeik) Vocal: Ye Myint Soe (Mya Myint Moh) “စြယ္ေတာ္ရိပ္ေဖါင္ေဒးရွင္း” ေရး တကၠသိုလ္မိုး၀ါ သံစဥ္ သန္းပို(စြယ္ေတာ္ရိပ္) ဆို ရဲျမင့္စိုး(ျမျမင့္မိုရ္) ဘ၀လမ္း……..မွာ၊ ေလ်ွာက္လွမ္းေနဆဲ..ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ဆရာသခင္……..၊ ရတက္မီး..အသက္ၾကီးေလမွမေလာင္ေစခ်င္၊ ထိုအခင္း အိုမင္း မယိုယြင္းခင္၊ ကိုယ္က်န္းမာေရး..နဲ ့၊စိတ္ခ်မ္းသာေရးကို […]
Update : December 29, 2021 ကျီးကန်းတောင်းမှောက်၊ ခေါင်းနောက်ဖွယ်အတိ ဟိုကြည့် သည်ကြည့်၊ မျက်စိလွှာစုံ မလုံ လိပ်ပြာ။ ပိုးဟပ်အလား ဟိုသွားသည်လာ၊ လူးလာ ခေါက်တုံ့ မြေကြောရှုံ့လျက်၊ ရည်ရွယ်ချက်မပါ လိပ်ပြာလုံပါစ….။ ဟိုလုပ်သည်လုပ် အလုပ် မမည်၊ ရွယ်ရည် မပေါက် ကျောက်ခဲ ရေညှစ်၊ ဆီဖြစ်မလာ လိပ်ပြာလုံရဲ့လား။ ဟိုရေးသည်ရေး အ, ကလေးနှယ်၊ အတွေးအခေါ် လွဲချော် ဇွတ်တိုး၊ လွှမ်းမိုးဖို့ကြံ ဝေဖန် စော်ကား၊ ငမိုက်သားခမျာ လိပ်ပြာလုံပါစ။ လိပ်ပြာမလုံ၊ တောင်ယာပုံ…. ခွာတုံ စွန့်ပြေး၊ လိပ်ပြာ စျေးတန်း ရောင်းပန်း မလှ၊ ပိုးကျ […]
Tekkatho Moe War (2)
Update : December 29, 2021 “ တစ်ခါတလေ ” လူဆိုတာလေ…..မျှဝေတတ်တဲ့ သတ္တဝါ။ ရင်ထဲသိုထား၊ ခံစားရချက်ထွက်သက် ဝင်သက်၊ ဒက်ခနဲဖမ်းဝမ်းသာဝမ်းနည်း၊ ဆီးပြီး ဖွင့်ဟဝေမျှပေးတတ်တယ်…။ တစ်ခါတလေ….နွေလို ပူပြင်း၊ ပြင်တလင်းမှာခြေနင်းမပါ၊ ဝေပြာမျက်စိနုံးခွေချည့်လို့၊ နတ္ထိ ဗလာခြေရာ ဦးပဲ့၊ ပန်းတိုင်မဲ့တဲ့ယဲ့ယဲ့ သနစ်၊ သည်အဖြစ်ကိုလှစ်ဆို လွှင့်ကြဲ၊ မျှဝေခွဲရင်ရင်ထဲပေါ့သွား သလိုလို။ တစ်ခါတလေ….သစ်ရွက်ခြွေလောင်း၊ ချမ်းခိုက်ဆောင်းမှာအောင်းကွေး စောင်ခြုံ၊ ခိုလှုံပျော်ရဘဝ မွေ့ရာ၊ ဆူးမပါတဲ့ရွှေကြာပင် တင့်၊ ငွါးစွင့်အခြေခွင့်လမ်းတွေနဲ့စံနေ မြက်မြက်၊ ခံစားချက်ကိုမျှလျက် ကြည်နူးတတ်ပြန်တယ်။ သြော်…..လူမှန်ရင်လေ…..မျှဝေတတ်တဲ့ သတ္တဝါ….။ ။ တက္ကသိုလ် မိုးဝါ၂၁-၁၁-၁၉၈၃
Tekkatho Moe War (3)
Update : December 29, 2021 ” လောကခုံရုံးမှာ ” ဘယ်လောက်ပဲ အရေခွံလဲလဲ ညှို့ဆွဲ ထောင်ချောက် မြွေဟောက်ဟာ မြွေဟောက် အသေပေါက်မှာပဲ…။ ဘယ်လောက်ပဲ အရောင်ပြောင်းပြောင်း ချောင်းမြောင်း အဟုတ်ထင် ပုတ်သင်ဟာ ပုတ်သင်ပါပဲ…။ အသားမျိုဆို့ နွားနို့သောက်စား၊ ဆိုဖာကျားပေါ် ဖားလျား ဘယ်လောက်ပဲအိပ်အိပ် တိတ်တိတ် အမြီးခါ… ခွေးဟာခွေးပါပဲ။ ပခုံးနှစ်ဖက်ကြား ခေါင်းကား တစ်လုံး၊ ဆံခြည်ဖုံးလွှမ်း မတ်တတ်လမ်းသွား၊ သွေးသားနဲ့သူ လူဟာ လူပါပဲလို့ ပြောဖို့ ခက်ခဲ….။ မြွေဟောက်ဟာ မြွေဟောက် ပုတ်သင်ဟာ ပုတ်သင် ခွေးဟာခွေးပေမဲ့….။ လူဟာလူဟုတ်မဟုတ် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ် ဆုံးဖြတ်ကြိုးကိုင်သွားလိမ့်မယ်။ ။ […]
Update : December 28, 2021 Aung Pyie by Tekkatho Moe War အောင်ပြည့်….. စာရေးဆရာ၊ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ၊ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အောင်ပြည့် နှင့် အစောပိုင်း ရင်းနှီးသမှုသိပ်မရှိခဲ့၊ နောက်ပိုင်း တော့အတော် ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးလေးစားစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ခု ရက်ပိုင်းတွင်သူ့ကိုမကြာခဏ သတိတရ ဖြစ်နေရာက သူ (အောင်ပြည့်) တာဝန်ခံအယ်ဒီတာလုပ်သည့်ကာလ၊ ၁၉၈၆ တစ်ဝိုက်ထုတ်သည့် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းများ ပြန်ကြည့် မိတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သော ကိုယ်တိုင်​​ရေး က​ဗျာတစ်ပုဒ် ပုံနှင့် တကွ စာမျက်​နှာအ​ပြည့် ။ အင်း…..။ သတိရစရာ မမေ့နိုင်စရာ မှတ်တိုင်တွေကိုး….။ အောင်ပြည့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ […]
Update : December 28, 2021 ယူနက်စ်ကို ၏ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ် ခံရသော ပုဂံမြေ….​” ပုဂံ အမွေ ” ကဗျာကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုခံစားစေရန် နှင့် အမေရိကားမှ ဦးလှမင်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ လှပစွာပြန်ဆိုထားခြင်းကိုလည်း အရသာခံဖတ်ရှုစေလိုသည့် စေတနာအရင်းခံစိတ် တို့ကြောင့် ပြန်လည်တင်ပြရခြင်း ဖြစ်…။ သည်နေ့ ၁၉-၁ဝ-၂ဝ၂ဝ ထုတ် Weekly Eleven တွင် ပါသော စာရေးသူ၏ဆောင်းပါး….. “ရသ အားလျော့သွားတတ်သော ဘာသာပြန်ဆိုမှု” (၁) ဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောရပါက စာရေးသူသည် ဘာသာပြန်သည့်အလုပ်ကို အနည်းအကျဉ်းသာလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ များသောအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာပေ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသိပ္ပံပညာတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာဘာ သာသို့ ပြန်ဆိုရေး သားခြင်း […]
Update : December 28, 2021 သည်နေ့ ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ထုတ် Weekly Eleven တွင်…. “အနှစ် ၅၀၊ အလွမ်းရယ်တဲ့တိမ်တောင်၊ ကျွမ်းမြှိုက်လောင်ခဲ့ ” (၁) ကြာမြင့်လှပြီဟုဆိုနိုင်သောအချိန်ကာလ၏ စာပေတစ်ခေတ်နှင့် ယင်းစာပေဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ထွန်းကားခဲ့သည့်​​အချိန်နှင့်အတူ ပုံနှိပ်စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် အများအပြားသည်လည်း ဝေဆာဖူးပွင့်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဥ်ကို မှတ်မိနေပါသေးသည်ဟုကနဦး လှစ်ဟပါရစေ။ မဂ္ဂဇင်းဆိုသည်မှာလည်းမိမိတစ်ကိုယ်တည်းအကြိုက်ပြောရလျှင် စာပေဟင်းလေးအိုးကြီးသဖွယ် စာမျိုးစုံ၊ ရသအဖုံဖုံပါဝင်နေသော စာအုပ်ဟု ခံယူထားသူဖြစ်သောကြောင့် ခုံခုံမင်မင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် မပြတ် ဖတ်မှတ်ခြင်းပြုခဲ့သည်။ နောက်ထပ် အကြောင်းခြင်းရာတစ်ခုမှာ စာရေးဝါသနာထုံသည့်အလျောက် မိမိပေးပို့ထားသော ကဗျာပါလာ၏၊ မပါလာ၏ဆိုသည်ကို လစဥ်ဆိုသလို […]